समाचारसोमबार, २५ आषाढ , २०७५
हालसम्म २६ वटा गैंडा उपहारस्वरुप विदेश पठाइसकेको नेपालबाट यो महीना एक जोडी गैंडा चीन पुग्दैछन् ।
भद्र । तस्वीरहरुः कल्पना भट्टराई
चीन लगिने दुई वर्षका जोडी गैंडालाई गएको वैशाख महीनामै चितवन निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्र खोरिया मुहान र सुखिभारबाट समातेर सौराहामा राखिएको छ । भद्र र रूपसी नाम दिइएका यी गैंडाले तालिमपछि मानिससँग घुलमिल हुन र खोरमा बस्न सिकेकोे चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्याल बताउँछन् ।
चीनको चिमे लङ्ग सफारी पार्कका सहायक प्रबन्धक डा. वाङले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आएर गैंडा लैजाने प्रक्रिया र तयारीका बारेमा जानकारी लिइसकेका छन् भने चीनका पशु चिकित्सक र साइटिसका अधिकारीहरू समेत सौराहा आएर गैंडाको निरीक्षण अवलोकन गरिसकेका छन् ।
नियमित स्वास्थ्य जाँच भइरहेका यी गैंडा चीन लैजान पूर्ण रूपमा स्वस्थ रहेको कोषका वन्यजन्तु चिकित्सक डा. अमित षडौला बताउँछन् । सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार दुई जोडी गैंडामध्ये एक जोडीलाई चीनको चिमे लङ्ग सफारी पार्क र अर्को जोडीलाई सांघाई वाइल्ड एनिमल पार्कमा राखिनेछ ।
यसअघि २०६२ सालमा जंगे र ब्युटी नामका एक जोडी गैंडा अष्ट्रियालाई उपहार दिइएको थियो । निकुञ्जका सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार नेपालले पहिलो पटक २०३४ सालतिर थाइल्याण्डलाई एकजोडी गैंडा उपहार दिएको थियो ।
त्यसपछि अमेरिकालाई दुई पटक एक–एक जोडी, जर्मनीलाई दुई पटक एक–एक जोडी; सिंगापुर, बंगलादेश, बेलायत, जापान र अष्ट्रियालाई पनि एक–एक जोडी गैंडा उपहार दिइएको छ । “कुन कुन देशलाई कहिले उपहार दिइयो भन्ने सबै विवरण उपलब्ध नभए पनि हालसम्म कुल २६ वटा गैंडा उपहारस्वरुप पठाइसकिएको देखिन्छ”, अर्याल भन्छन् ।